कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिसँगको अनुभव - Jagaran Post
जागरणपोस्ट १५ आश्विन २०७७, बिहीबार १९:१३ विचार / दृष्‍टिकोण
प्रत्येक व्यक्तिका अनेकौं चाहनाहरु हुन्छन् । कसैका साकार हुन्छन्, कसैका चरणबिन्दुमा पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् त कसैका अधुरो नै रहेको हामीले देख्न अनि सुन्न पाइन्छ । बिगत १० बर्ष अगाडी स्वास्थ्य सेवामा लागि समाजलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अगाडी बढाउने अठोट विचार मनमा उब्जिएसंगैै स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन तथा व्यवहारिक शिक्षालाई विभिन्न संंघसंस्था हँुदै आजसम्म आईपुग्दा तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गतको एक स्वास्थ्यकर्मी हुने अवसर जुटेको छ । यतिबेलासम्म देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि स्थापना भैसकेको थियो ।
चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको नोवेल कोरोना भाइरसले छोटो समयमा नै विभिन्न देशहरुमा आफ्नो कहर बर्साउन थाल्यो । बि.सं. २०७६ साल माघ १० गते कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । त्यसबखतमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरु सँगसंगै राहत वितरणका कार्यक्रमहरु पनि संचालन भैरहेका थिए ।
स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका मुलतः अहम् साबित भैरहेको त्यसघडिमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागी जनसमुदाय र जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहयो । मेरो जीवनको आजसम्मको भोगाईमा यस किसिमको माहामारी पहिलोपटक आफ्नै आँखाले देखेको अनि भोगिरहेको थिए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकमा जम्मा १७ वटा वडाहरु छन् । तेस्रो मुलुकवाट आउने सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वबोधको आभास भैरहेको थियो । म लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको टिमले कोरोना भईरसको संक्रमणको रोकथामको लागि समुदायमा परिचालन हुने मुख्य जिम्मेबारी पायांै । यस जिम्मेवारीमा आफुपनि सम्मेलित हुन पाउँदा म आफूलाई निकै भाग्यशाली ठान्दछु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागिरहँदा हिजोका दिनसम्म जनसमुदाय र जनप्रतिनिधिसंगको सम्बन्ध जति राम्रो थियो यो अभियानले अझ दरिलो र प्रगाढ बनाउँदै लगेको महसुस गर्न थाले । दिन–रात, घाम–पानी नभनी विषम परिस्थितिमा संक्रमण रोकथामका लागी खटिने स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुको त्यो चासो र चालिएका पाइलाहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु ।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य क्षेत्रले लिएको कदमलाई समुदायले सकारात्मक ढंगले लिएको महसुस पनि गरे । यस किसिमको समन्वय र सहकार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । कोरोना भाईरस संक्रमणको आसंका लागेका वा कोरोना संक्रमण पुस्टि भएका नागरिकहरुसँग स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिहरु अपनाएर काम गरियो ।
यसै सिलसिलामा तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटा वडाका जनप्रतिनिधिहरुसँग घरदैलोमा पुगी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मनोसामाजिक परामर्श, जनचेतना लगायतका कार्यहरु पनि अवलम्बन गरियो । त्यससमयमा सम्बन्धीत क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु आफुसँंग हँुदा आईपर्ने विभिन्न समस्यालाई उचित व्यवस्थापन सहित निवारण गर्न अझ बढी उर्जा अनि सहयोग पुगेको महसुस गरे । साथै अगामी दिनहरुमा पनि जनप्रतिनिधि र जनसमुदायको हातेमालोको व्यवहारले काम गर्न थप उर्जा तथा हौसला प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा गरेको छु ।
समुदायमा परिचालन भैरहेको अवस्थामा बिगतका दिनहरुमा भन्दा अहिले हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति कताकता धमिलो भएको जस्तो अनुभूुति गरेको छु । तर समुदायको त्यो दृष्टिकोण स्वभाविक हो जस्तो पनि लाग्छ ! किनभने हामी स्वास्थ्यकर्मी उच्चजोखिममा रहेर काम गरिरहेका छौँ । केस अनुसन्धान तथा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ्ग समुह (सिआईसिटिटि)मा कार्यरत भएको हुनाले पनि संक्रमित बिरामीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । जसले गर्दा समय सापेक्ष बिचार र दृष्टिकोणमा आउने परिवर्तन स्वभाविक र अर्थपूर्ण रहेको पनि महसुस गरको छु ।
लेखक तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ ।